Sheekh Shariif oo ay Nayroobi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Kenya kadib markii Mareykanku sidaasi u sheegay, QM iyo EU-da oo fariin adag u diray dowladda madaweyne Yuusuf. Ruukinet 23/01/07
Guddomiyaha golaha fulinta ee Maxaakiimtii laga xoog roonaaday iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan midowga maxaakiimta ayaa shalay si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Nayroobi.
Sheekh Shariif iyo madaxda kale ee la socoday ayaa la sheegay in dayurad gaar ah looga soo qaaday degmada Wajeer oo ay ku sugnaayeen.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya oo uu ka mid ahaa safiirka dowladd Kenya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Amb. Afey ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Sheekh Shariif iyo mas'uuliyiin kale oo la socotay.
Warka ayaa intaasi ku daraya in arrintan ay ka dambeysay dowladda Mareykanka oo dooneysa in ay wada hadlaan xukuumadda Col. Cabdullahi Yuusuf iyo golaha midowga maxaakiimta.
Dhanka kale, wakiilka QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo wasiirada arrimaha dibadda ee EU-da ayaa u sheegay in ay dowladda federaalka ah siyaasaddeeda wax ka bedesho.
Wakiilka QM u qaabisan arrimah Soomaaliya ay sheegay in QM aysan ku qanacsaneyn xil kaqaadidda ra'isul guddoomiye Shariif Xasan ee golaha baarlamaanka.
Sidoo kale, EU-da ayaa sheegtay in asyan siin doonin wax macaawino ah dowladda Soomaaliya inta ay ka laabaneyso xil qadidda Shariif Xasan iyo inta ay ka ogolaaneyso in ay la wada hadlaan golaha maxaakiimta ee dagaalkii ay la galeeen Itoobiya looga adkaaday.